Indlela amajelo afumana ngayo ibali labo ngokuhlalutya ngokugqithisileyo kwaye aqhubeke nokukhahlela ibali labo ngokuthembeka (Jos Brech): UMartin Vrijland
Ngothusayo ndijonga ukuphindaphinda kukaPauw, apho igqwetha likaJos Brech, uGerald Roethof, lilungise lakhe ibali ngokuchanekileyo nqaku ukuba ndapapasha ngosuku ngaphambi kokusasazwa. Kwakubuhlungu kakhulu ukuba kukho ngokukhawuleza ezimbini iifom ezitsha ngokupheleleyo kwitafile. Amandla amatsha abantu ekugqibeleni bayakudlulela. Kamsinya, i-DNA kaJos Brech kwiintonga zikaNicky Verstappen yayiza kufumaneka kwaye ngokukhawuleza kwakuya kubakho i-pornography yabantwana kwi-PC yakhe.
Umboniso wokulwa phakathi kweGerald Roethof kunye noPeter R. de Vries ungaphezulu kwayo yonke imbonakalo eyinxalenye yokudlala umfanekiso wabantu. Roethof midlalo igqwetha elibalulekileyo elingavumelekanga ukuba liqhutywe nguPeter R. de Vries, kodwa okwangoku ithatha inxaxheba ekuqondiseni umfanekiso wombukeli. URoethof wenza inkohliso ihamba ngokuzenza ngathi ingabalulekanga malunga nenani loonografi elifunyenwe ngabantwana kwaye libuza indlela iphelile ngayo kwi-PC. Kwakhona wagxininisa ngamagama malunga neendlela ezininzi ezifunyenweyo ze-DNA zabanye abantu, kodwa kubonakala ngathi unokukwazi ukubeka ngaphandle kwePetro R. de Vries. Oko wakwenzayo hayi ukwenza okubaluleke ngakumbi! Yintoni uRoethof akwenziyo yinto enye ubuchule bokulwa izicelo malunga nokulandelwa kweengxelo zeDNA kunye neengcamango ezingamanyala.
U-Roethof udlala umdlali obalaseleyo ophikisana noDe Vries, kodwa umvumela ukuba alahleke ngokuzikhusela ngokwenene. Ukuba uNicky Verstappen wayexhatshazwe kwaye wafa, kuya kuba mnandi ukuba umenzi wobubi ufunyanwe emva kwe-20 iminyaka. Umbuzo, nangona kunjalo, nokuba ngaba sisebenzisana ne-PsyOp (Psychological Surgery) ukuzisa imigaqo emitsha (njengedatha yedatha ye-DNA, umzekelo). Ukuba kunjalo, umntu kufuneka aqhubelele eli phepha kwaye ngoko ufuna ukuba ngummeli we-PsyOp evela ku-patsy (umdlali odlala indima yephulo) akayi kuseka nophando oluzimeleyo. Emva koko awufuni umbono wesibini ngendlela yobuchule bokuphikisa; ngoko umsebenzi wakho uqhubeka ukunika ukuthembeka kwimbali, ngokuza ngokumxabisa nokuhlasela uPetros R. de Vries kwiTV. Ngokwenza njalo, ubamba abafundi abalulekayo baseMartin Vrijland kwaye wonke umntu ukhonjiswe kumphathi wePaw.
Ndiwela ngokuphindaphindiweyo, kodwa yonke into ibonisa ukuba le yi-PsyOp, ngoku ngokukhawuleza i-DNA yayisezambatho zangaphantsi zikaNicky Verstappen. UPeter R. de Vries uhlamba amatyala amasha, okuthi apho umzimba kaNicky Verstappen ngokukhawuleza kwimeko yokuchithwa kwakuya kuba bekukho umphumo omncinci wokubanjelwa nge-autopsy. Lona lixoki elibi kakhulu lokuba unako ukuxhoma kwi-tube, kodwa uPeter R. de Vries unenkululeko yamahhala kunye noGerald Roethof akakho ukucacisa ubuxoki bukaPeter R. de Vries. URoethof uqobo kwaye nje uzenza ngathi unzima kakhulu. Ku malunga nokuqonda kwakho; imbono yombukeli.
Zange kukho ingcaciso DNA kwi iblukhwe, kukho zange wafumana umntwana izinto zoburheletya zange nezingqinekayo ngetyala lokubulala, nokubulala okanye ukuxhatshazwa ngokwesondo. Kwakungumcimbi owawungeyona nto. Ukuba oko kuvalelwa liye landiswa kunye iintsuku 90, lomthetho ngokungqongqo ngoko kabi kwaye kufanele kuphela injongo 1: sele Wena kucingelwa ukuba zivaliwe, imeko ienjini yakho kumbukeli. Ngeentsuku ze-90 usuxakekile kwezinye izinto, ezifana neeholide yakho ye-ski okanye ingxoxo emnyama. Inkqubo eyenziweyo yile: "Sinomntu onqaba ukuthetha into ethile, kodwa i-DNA ifunyenwe kwiingubo zangaphantsi kunye noonografi bezingane ezifunyenwe kwiPC yakhe, ngoko nguye umenzi wobubi". Icala liya kufakwa kwisitokethi kwiintsuku ze-90. Ngenxa yokuba ibali kumajelo alondolozwa ngokuqhubekayo kwinto endiyibhalayo ngale nto, andisenzi naziphi na izibikezelo.
Urhulumente ufuna lutho ngaphezu DNA wonke umntu kwidathabheyisi enkulu kazwelonke, ngoko ke uya zahlelwa ngokuswela PSYOP apho DNA waba obungahexiyo. Ukubonakala kukuba oku kulungisa ukusombulula ubugebengu. Ngaba uyazi isicwangciso transhumanist ukuya umbuso amapolisa yileyo apho wonke umntu enxulumene ingqondo kwaye amalungu ye Internet, oku ilifa DNA ye ngamnye iluncedo kakhulu. Oorhulumente basebenzisa i-ajenda yexesha elide ngokuphunyezwa komthetho ngoku "Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo'ukuqinisekisa ukuwamkela.
Ithelevishini ibonisa ukuthumela umbono wakho. Ingxoxo ebalulekileyo okanye umzabalazo womlomo kuphela ukuphazamisa imibuzo ephakamileyo kunye nokuthembeka. Ulahlekiswe.
FUNDA I-FILE FILE
tags: Brech, eziziimbalasane, gerald roethof, jos, UNicky Verstappen, Peacock, UPeter R. de Vries
24 Septemba 2018 kwi-11: 25
Ndiyifunde yonke iMartin, ividiyo engayifaki ngaphezu kwemizuzu ye-2.
Ndiyathokoza ukuba ubonisa indawo esikuyo kum.
Ingozi yokujongela iindawo ezizungezile
24 Septemba 2018 kwi-11: 59
Kukho iindaba ezilungileyo Ndibona ngathi, geenstijl ukuzimela, wena ungaba lilungu athenge Beatrix isithsaba pink, kodwa ke iindaba enkulu, ukuba ezimbalwa reaguurders (endiyenzayo mna ndiyayithanda) lo mgibe wengcibi Ukuwa kubuhlungu kakhulu, buhlungu gqitha.
Ukukhanya okungenakubulinganiswa kokukhokho kweso sakhiwo yindawo emnyama, indawo apho abantu abathanda wena kunye nam sibanjwa ukuba sasingazi kakuhle.
Ngamanye amaxesha ndiboleka amahlaya apha, ngaphandle kobuhle besinabo.
24 Septemba 2018 kwi-15: 38
Ukuba kukho i-DNA yedatha yedatha, akudingeki ukuba iphande ukuba ngaba abazali bakaPetros R de Vries bangamabhokhwe. Oku kunokubona umntu oyimfama. Thetha malunga nehlazo.
« Olandelayo uhamba kwiNicky Verstappen - Jos Brech psyop? Iifoto zoonografi ezitholakalayo!
I-hypothesis yokuxubusha »
Utyelelo lulonke: 4.256.720
UMartin Vrijland op Ngaba ulahlekelwe yimfazwe? Okanye ngaba ngokwenene siza kuvuka kwaye sithathe inyathelo?
UJack van Dijk op Ngaba ulahlekelwe yimfazwe? Okanye ngaba ngokwenene siza kuvuka kwaye sithathe inyathelo?
UMartin Vrijland op ICoronavirus covid-19: esingayivayo ngoMaurice de Hond noWillem Engel, icandelo 2
Marianne op Ngaba ulahlekelwe yimfazwe? Okanye ngaba ngokwenene siza kuvuka kwaye sithathe inyathelo?
I-OVI op ICoronavirus covid-19: esingayivayo ngoMaurice de Hond noWillem Engel, icandelo 2